Reception | New Green Light Group Co.,Ltd ﻿
9.10.2019, Full time , Distribution / Logistic
Company: New Green Light Group Co.,Ltd
•	Report ကောင်းမွန်စွာပေးပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။(မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူများကိုဦးစားပေးမည်။)
•	ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ(သို့) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်
•	Microsoft Office, Internet, Emailအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Work location No.4/B, Bayin Naung Avenue(1), Insein Township, Yangon.
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းစစ်ဆေးခြင်းကိုလက်ခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Report ကောင်းမွန်စွာပေးပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
New Green Light Group is the leading distribution company in Myanmar. We distribute Dow Corning, Unico Casa, Dunlop, Green, and APLUS brands throughout MYANMAR.
Dow Corning Construction Silicone Unico Casa Tiles Green Tiles Dunlop Adhesives Green Lighting Products
New Green Light Group is the leading distribution company in Myanmar.
Showroom Manager Associate
•	Must have strong reporting skill
•	၀န်ဆောင်မှုပေူခြင်းကို အထူးနှစ်သက်သူဖြစ်ရမည် •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Report ကောင်းမွန်စွာ ပေးပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	Good Knowledge and skills in Adobe Photoshop and adobe Illustrator software •	Must have strong communication skills •	Able to work under pressure with dead-lines
•	Report ကောင်းမွန်စွာ ပေးပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	လိုအပ်လျှင်ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
•	မိမိတာဝန်ယူထားသောဆိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိရမည်။ •	Report ကောင်းမွန်စွာ ပေးပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	လွတ်လပ်မှုနှင့်တာဝန်ယူမှုရှိသော လုပ်ငန်းခွင်တွင်နှစ်သက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော သူဖြစ်ရမည်။ •	Report ကောင်းမွန်စွာ ပေးပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	လိုအပ်လျှင်ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
•	Report ကောင်းမွန်စွာပေးပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	Having strong reporting skills
Reception Customer Service & Call Center Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon New Green Light Group Co.,Ltd Customer Service & Call Centre jobs Customer Service & Call Centre jobs Distribution / Logistics Jobs in Myanmar, jobs in Yangon